तपाईलाई थाहा छ दीपिका पादुकोणले आफ्नो अंगरक्षकलाई कति तलव दिन्छीन् ? « Sansar News -->
तपाईलाई थाहा छ दीपिका पादुकोणले आफ्नो अंगरक्षकलाई कति तलव दिन्छीन् ?
२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०८:५९
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले आफ्नो सुरक्षाका लागि करोडौ खर्च गर्ने गरेकी छन् । बलिउडको सिने क्षेत्रमा मात्र नभएर विश्वमै नाम कमाएकी अभिनेत्री दीपीका पादुकोणले आफ्नो सुरक्षामा खटिने अंगरक्षकलाई बार्षिक एक करोड खर्च गर्ने गरेको बलिउड लाइफ डटकमले लेखेको छ ।
बलिउडमा राम्रो पारिश्रमिक लिने र बढी कमाउने अभिनेत्रीका रुपमा रहेकी दीपिकाले आफ्नो सुरक्षाका लागि आफ्ना सुरक्षामा खटिने जलाल नामका अंगरक्षकलाई बार्षिक १ करोड भारु खर्च गर्ने गरेकी हुन् । दीपिका आफ्नो सुरक्षाका लागि बढी खर्च गर्ने अभिनेत्रीका रुपमा मानिन्छीन् ।
उनले जलालाई भाइ मानेर प्रत्येक वर्ष हातमा राखि बानिदिने गरेको समेत बताइन्छ । ३४ वर्षीया यी अभिनेत्रीले २०१८ मा अभिनेता रणविर सिंहसँग बिवाह बन्धनमा बाधिएकी हुन् ।
बेंगलोरमा जन्मिएर मुम्बईमा रहँदै आएकी अभिनेत्री पादुकोण कलेज पढ्दादेखि नै मोडलिङ क्षेत्रबाट सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । २००७ मा फराह खानद्धारा निर्मित ‘ओम शान्ति ओम’मा साहरुख खानसँगै मुख्य भूमिका निभाएपछि बलिउडमा सफलताको सिढी चढ्दै गएकी हुन् । उनले अहिलेसम्म झण्डै ३ दर्जन बढी फिल्ममा मुख्य भूमिका निभाएकी छन् ।